Sayina - i-US Ilungelo lokwazi
Ilungelo lase-US lokwazi liqela lophando elingenzi nzuzo elenza uphando oluphambili lokuveza ukuba ukutya okunomdla kunye nemveliso yamachiza inefuthe elingakanani kwimpilo yoluntu. Siyakholelwa ukuba uluntu kufanelekile ukuba lwazi ngakumbi malunga nendlela iiarhente zolawulo ezisebenza ngayo-kwaye ezingasebenzi- kuluntu; kunye nendlela imali kunye namandla ombane anefuthe ngayo kuphando kunye nasekwenzeni izigqibo kumanqanaba aseburhulumenteni nakwimanyano. Ukusukela ngo-2015, sifumene saza senza amawaka oshishino kunye namaxwebhu karhulumente aqukethe ulwazi uluntu olunelungelo lokwazi.
Bhalisela ileta yethu yeendaba, ilungelo lokuHlala, ukufunda ngomsebenzi wethu wamva nje.
Fumana imicimbi edlulileyo ye- Ilungelo lokwazi ukuphononongwa.
Ukutya okuGcinelwe uLwazi>